Janaraal Siciid Dheere oo qorsheynaya in uu u tartamo madaxweynenimada Puntland 2019 - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandJanaraal Siciid Dheere oo qorsheynaya in uu u tartamo madaxweynenimada Puntland 2019
Janaraal Siciid Dheere oo qorsheynaya in uu u tartamo madaxweynenimada Puntland 2019
September 30, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Janaraal Siciid Maxamed Xirsi oo loo yaqaan Siciid Dheere, ayaa lagu waramayaa in uu qorsheynayo in uu u tartamo madaxweynaha Puntland ee doorashada 2019-ka.
Ilo-wareed ka ag-dhow Janaraalka, ayaa warsidaha Puntland Mirror u sheegay in uu qorsheynayo in uu isu soo taago madaxweynaha Puntland.
Siciid Dheere ayaa hadda ah taliyaha ciidamada difaaca Puntland.
Taliyaha ayaa la filayaa in dabayaaqada sanadkan uu ka tagi doono xilka uu hadda hayo si uu u galo ololihiisa doorashada, sida Ilo-wareedku sheegay.
Waxa uu taariikh dheer ku leeyahay ciidamada Puntland iyo Soomaaliya. Isaga oo soo noqday taliyaha ciidamada qaranka Soomaaliya xilligii Madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed uu ahaa madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Waxa uu ahaa saaxiibka ugu dhow ee Cabdullaahi Yuusuf, isaga oo kala soo qeyb qaatay ilaa iyo halgankii SSDF ama Kulmis.
Janaraalka ayaa u muuqda in uu doonayo in ciidamada ay saameyn ku yeeshaan xukunka tan iyo maamuladii Cabdulaahi iyo Cade oo ahaa saraakiil ciidan, halka labadii maamul ee u dambeeyay ay Puntland maamulayeen siyaasiyiin rayid ah.
Dadka falaanqeeya siyaasadda ayaa amminsan in Siciid Dheere uu heli karo taageero badan marka loo fiirsho ixtiraamka iyo qadarinta uu ku leeyahay shacabka Puntland.
Maalmihii, u dambeeyay waxaa jiray khilaaf u dhaxeeyay isaga iyo Madaxweynaha hadda xilka haya ee Cabdiweli, khilaafka ayaa ku saleysan kadib markii taliyuhu damcay in uu shaqada ka tago isaga oo sheegay in uu daneynayo in uu madaxweyne u tartamo.
Sida wararku sheegeen, taliyaha ayaa sidoo kale aan ku qanacsanayn qaabka uu madaxweynuhu u maamulay is-mariwaaga wakhtiga dheer ka jira deegaanka Tukaraq ee u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo Somaliland.
Saddex bilood ayaa ka harsan doorashada madaxweynenimada Puntland oo la filayo in ay qabsoonto bisha Janaayo ee sanadka 2019-ka.
Musharixiin badan ayaa u tartamaya xilkaas, kuwaasoo hadda ololahooda ka bilaabay gobolada Puntland.
Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya oo Qaramada Midoobay ka dalbaday in cunoqabateynta hubka laga qaado
Mareykanka oo duqeyntii ugu horeysay ee Soomaaliya sanadka cusub ku dilay labo maleeshiyo oo Al-Shabaab ah
Muqdisho-(Puntland Mirror) Milatariga Mareykanka ayaa qaaday weerar duqeyn cirka ah oo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan Soomaaliya, Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa maanta oo Arbaco ah bayaan ku sheegay. Weerarka ayaa Talaadadii shalay [...]
Kenya-Somalia Sea border dispute begins
Hague-(Puntland Mirror) a sea border dispute between Kenya and Somalia begins on Monday at the International Court of Justice (ICJ) in The Hague in Holland. Somalia is determining the sea waters to be adjusted along [...]
Al-Shabab fighters capture Goof Gudud village from Somali government forces
Mogadishu-(Puntland Mirror) Al-Shabab fighters on Thursday captured Goof Gudud village from Somali government forces, after a deadly fighting between the government forces and the fighters, sources say. At least 7 people from warring sides were [...]